WAR CULUS:IGAD,Midowga Afrika,AMISOM,QM,Uk, oo Axmed Madoobe Ka Horyimi Kuna Dhawaqay Inaysan Aqbalayn Doorasho Sida Ku Dhacday – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSoomaliyaWAR CULUS:IGAD,Midowga Afrika,AMISOM,QM,Uk, oo Axmed Madoobe Ka Horyimi Kuna Dhawaqay Inaysan Aqbalayn Doorasho Sida Ku Dhacday
WAR CULUS:IGAD,Midowga Afrika,AMISOM,QM,Uk, oo Axmed Madoobe Ka Horyimi Kuna Dhawaqay Inaysan Aqbalayn Doorasho Sida Ku Dhacday
August 18, 2019 marqaan Soomaliya, Wararka maanta 2
Wakiilka QM ee Soomaaliya, James Swan ayaa ka dalbaday Guddiga doorashada Jubbaland in ay fuliyaan dhammaan qodobadii ay ka dalbadeen beesha caalamka taasoo aan la fulin qaar ka mid ah qodobadaas.
Warqad uu u direy guddoomiyaha guddiga doorashada Jubaland, Xamza Cabdi Barre ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ayaa ugu horeyntii loogaga mahadceliyay guddiga go’aanka ay saddex maalmood dib ugu dhigaan
“Warqaddeeni 8-da August, ee aan kuu soo diray aniga oo wakiil ka ah saaxiibada Soomaaliya ee caalamka, waxaan ku adkeynay muhiimadda hanaan doorashada oo cad, la isku raacsan yahay, la isku haleyn karo , islamarkaana heli kara taageerada dadka Jubaland oo dhan, horseedi karana midnimada bulshada Jubaland.” ayuu ku qoray James Swan qoraalkii uu u
direy guddoomiyaha doorashada Jubbaland Xamza.
Wakiilka QM ayaa ku xusay qoraalkiisa in haddii aan la qaadan tallaabooyinka ay codsatay beesha caalamka aysan taageeri doonin natiijada hanaanka doorashada Jubaland. “Guddiga doorashada haddii uusan wax laga qaban walaacyada muhiimka ah ee ay qabaan dhinacyada ay quseyso arrintan, waxaa jirta halis ah in natiijada hanaanka doorashada uusan heli doonin taageerada buuxda ee lagama maarmaanka u ah in la joogteeyo xasiloonida iyo nabadda Jubaland” ayuu sii raaciyay James Swan.
DEG DEG: Farmaajo iyo Kheyre oo go’aan adag ka qaatay Mustaqbalka Axmed Madoobe.
DAAWO MUUQAAL:Nasteexo Indho oo ka Hadashay Muuqaalkii Cida Ka Duubtay,falcelinta Bulshada Muuqaalka
Jemes Aswan wakilka Besha Calanka waxuu udhaqmaya ama Tixracay Qoralka ama warsaxafadedka Xukumada Muqdisho,waxad moda in wakilka UN ee somaliya in uu ka cabsanayo madaxweyne Farmajo oo aay surta galthay in uu wadanka kacayriyo,waxad moda in uu badalay moqofkisi hore,mida kale xagge lagu arkay ummad aan mucarad lahan? waxa kale oo iga yabisay Xukumada muqdishoi oo Dasturka Qaranka iska harermaratay jemes Aswan waxba kuma haysto maxuu jubaland amarada usinaya?
Axmed madoobe, hanjabaad wax lagaga qaadimayo, Kismaayo waa meel halis istrateeji leh, cid cadow la ahSomaliyana haduu la xirto waa dhibaati iyo Fashil dowladda ah. Farmaajio iyo kheyre in ay is waalaan ma aha, meeshaan Gobollada dhexe ma aha waa mee xuduuda waa dhul bad ah, waa dhul biya ah. axmedmmadoobe hadii dadkisii doorto, wax ay ka qaadayaan malaha. nin baan wadanaa, dhuusamareeb ayey ka socon weydey, waxayna keentay dagaal qarka la isu saaran yahay. Farmaajio wuu deg degayaa.